Sergio Ramos oo qaab ka duwan sidii hore kaga hadlay wararka ku aadan dhaawacii uu u geystay Mohamed Salah – Gool FM
Sergio Ramos oo qaab ka duwan sidii hore kaga hadlay wararka ku aadan dhaawacii uu u geystay Mohamed Salah
Dajiye June 5, 2018
(Real Madrid) 05 Juunyo 2018. Kabtanka kooxda Real Madrid Sergio Ramos ayaa wuxuu beeniyay in si ula kac ah uu u dhawaacay weeraryahanka kooxda Liverpool Mohamed Salah ama goolhaaye Loris Karius midkoodna.
Ramos ayaa sabab u noqday dhaawaca soo gaaray Mohamed Salah, xili sidoo kale dhaawac uu u geystay wijiga goolhaayaha Reds Loris Karius, inta uu socday kulankii finalka Champions League ay Real Madrid guusha ku gaartay 3-1.
Ramos ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay: “Arinta Salah waxay geeryeen meel fog, mana rabin inaan ka hadlo si aysan arinta u weynaanin”.
“Laakiin marka aan arko ciyaarta, isaga ayaa ugu horeyn qabsaday gacanteyda, anigana waxaan u dhacay dhinaca kale, dhaawaca wuxuu kasoo gaaray dhanka kale, laakiin waxay dhaheen inaan si ula kac ah arintan u sameeyay”.
“Markaas kadib, goolhaayaha ayaa sheegay inuu dhaawac kasoo gaaray isku dhaca aniga iiyo isaga, kaliya waxaa harsan in Fermino uu isna sheego inuu hargab qabo hargab qabow ka dib markii ay gaartay dhibic ka mid ah dhididkeyga inta kulanka uu socday”.
Intaas kadib Ramos ayaa wuxuu sheegay in uu xiriir la sameeyay Mohamed Salah, isagoo tilmaamay in xaaladiisa ay aad u wanaagsan tahay.
“Waxaan la sheekeestay Mohamed Salah, xaaladiisa caafimaad aad ayay u wanaagsan tahay”.
Dhakhaatiir Xaqiijisay in Ramos uu Sabab u ahaa Labadii Gool ee sida Sahlan uga dhalatay Goolhaye Loris Karius Finalkii Champions League...(Sidee??)
Guardiola oo ka hadlay is casilaada Zidane isagoo dhinaca kale meesha ka saaray in Neymar uu u dhaqaaqi doono Real Madrid